Saadaq Joon oo dibindaabyadii ku badelay u adeegid bulsho | KEYDMEDIA ONLINE
Saadaq Joon oo dibindaabyadii ku badelay u adeegid bulsho
Saadaq Cumar Xasan Joon, oo Farmaajo sheegay inuu ka dhigay garaadihii saarnaa, ayaan u muuqda in uusan middaas dhag jalaq u siin, Madaxda, siyaasiyiinta iyo shacabka degaannada Galmudug, ayaana u gartay inuu kaalintiisa ka ciyaaro dib u xoreynta degaannada.
GAALKACYO, Soomaaliya - Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Joon), ayaa todobaadkaan qabsaday barasha bulshada, kadib markii la ogaaday inuu ka mid yahay hoggaanka ciidamada huwanta ah ee howlgalka xooggan ka wada degaannada dhaca koofurta Gobolka Mudug.
Saadaq oo hore uga soo shaqeeyay Nabad-sugidda Galmudug, ayaa mar kale dib ugu laabtay degaannada Maamulka, kadib markii uu door dahabi ah ka ciyaaray, is hor istaaggii, damacii muddo kororsiga ee Farmaajo samaystay bartamihii bishii April ee la soo dhaafay.
Saadaq oo ku dhawaad Afar sano, si buuxda ula shaqeynayay Kooxda Farmaajo, ayaa ugu danbeyn ka hor yimid in koox tiro yar oo ka tirsan Baarlamaanka Aqalka hoose, ay muddo kordhin u sameeyaan Farmaajo, wuxuuna is hor istaag ku smeeyay inuu furmo kulankii Golaha.
Wuxuu xildhibaannada Baaralamaanka faray inay doorasho u aadaan degamadoodi, oo aysan qalalaase u horseedin dalka, halka uu Ra’iisul Wasaaraha ugu baaqay in uu qaato doorkiisa.
Isla maalintaas, Taliyaha Boolika Soomaaliya, Xijaar, ayaa xilkii ka xayuubiyay Joon, ka hor inta uusan Farmaajo oo qudhiisa mudadii sharciga ahayd ka dhamaatay ka qaadin darajooyiinka ciidanka iyo xuquuqaadkii uu lahaa.
Intaas kadib, Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, ayaa qeyb ka noqday isku dhacyo hubeysan oo lagu hakiyay damicii muddo kordhinta, oo ahaa ubucdii xasaradaha, wuxuuna ugu danbayn go’aansaday inuu u adeego degaannada dayacan ee uu ka soo jeedo.
Joon, oo muddo caburinayay shacabka Muqdisho, isaga oo fulinaya amarrada Farmaajo, Fahad, Xijaar iyo Biixi, isla markaana dabaabaad gaashaaman kula duulayay siyaasiyiinta mucaaradka, ayaa hadda u muuqda inuu cagta saaray toobiyaha toosan, dibindaabadii shacabkana ku badelay u adeegidda dadweynaha.
Difaaca ay kooxdii uu hore uga tirsana uga jiraan Daljika Dhason, wuxuu ku badelay duullaan cir iyo dhul ah iyo howlgal saf ballaaran ah oo uu ka wado degaannada koofure ee gobolka Mudug, wuxuuna ku sii wajahan yahay degaannada xeebta oo aan hore gacanta Al-Shabaab uga bixin.